Nagu saabsan - Topshine Qaybaha Gawaarida (NanChang) Co., Ltd.
Topshine qaybaha qalabka baabuurta waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan soo saarayaasha qalabka caagada iyo ganaaxyada ee Shiinaha, kaas oo la aasaasay 2006. Topshine waxay leedahay in ka badan 50 qalabka wax soo saarka horumarsan iyo mashiinada qalabka baaritaanka. Waxaan bixinaa tiro balaadhan oo ah qaybo caag ah auto (Qalabka Mashiinka,Strut Mounts / Qalabka Neefta Neefta, Xarunta dhalista,Tubbo hawo / tubbo caag ah,Ku mashquulsan) iyo qaybo ganaax baabuur ah (Gacanta xakamaynta,Wadajirka Kubadda,Ku Xidh Rod End,Dhamaadka Rack,Cross Rod / Xarunta Xiriirka,Xiriiriyaha Xasilinta,Gacanta Idler,Pitman Arm). Marka waxaad si sahal ah uga heli kartaa qaybaha tayada sare leh ee aad ubaahantahay qiimaha ugu tartanka badan. Markaad ka iibsatid qalabka gawaarida qadka internetka www.topshineparts.com Waad ku kalsoonaan kartaa inaad heli doonto qiimo jaban oo jumlo ah oo ah qaybaha gawaarida, dhammaan qeybaha aan iibinana waxay leeyihiin dammaanad dhammaystiran. Waxaan sidoo kale fahannay sida ay muhiimka u tahay helitaanka qaybaha saxda ah marka laga iibsanayo qalabka otomaatiga qadka. Taasi waa sababta dhammaan qeybaheena ay leeyihiin ballanqaad ku habboon saxda ah ee aan dammaanad qaadno.
Topshine waxaa maamula nidaamka maareynta TS16949. Alaabtayada waxaa lagu soo saari karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha waxayna bixiyaan adeeg kaamil ah iibka kadib. Waxyaabaha loo dhoofiyo Mareykanka, Yurub, Bariga Dhexe, Australia, Japan, Latin America iyo in kabadan 30 dal iyo gobol. Waxaan iibineynaa dhammaan noocyada gawaarida, oo ay ku jiraan Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, Ford, Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, Audi, Chevrolet, Land Rover, iwm. hel aqoonsi iyo aqoonsi caalami ah. Topshine waa alaab-qeybiyahaaga lagu kalsoon yahay. Haddii aadan heli karin macluumaadka aad u baahan tahay, fadlan naga soo wac 18070095538 Shirley ama email noo soo dirsales@topshineparts.com Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno inaad hesho qaybaha aad u baahan tahay oo aan bilowno inaan kuu adeegno.
Macaamiisheena iyo la-hawlgalayaashayada
Aad ayaan uga dhab nahay amar kasta, taas oo ah falsafadeena ay Topshine had iyo jeer u dooddo. Waxaan haynaa hubin tayo leh oo ka timaadda soosaarka alaabta ceeriin ilaa alaabooyinka dhammaaday. Qalabka iyo soosaarka amar kasta, iyo sidoo kale baakadaha, calaamadeynta, xirxirida, baakadaha iyo keydinta alaabada, ugu dambeyntiina alaabtu waxay ku imaanayaan gacmahaaga. Waxaan la soconaa nidaamka oo dhan waxaanna siinaa warbixinno, sawirro iyo fiidiyowyo macaamiisha si waafaqsan macaamiisha looga baahan yahay. Dammaanaddeena waxay daboolaysaa alaabada nalaga soo diray muddo dhan 2 sano. Alaabtayada waxaa lagu soo saari karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha waxayna bixiyaan adeeg kaamil ah iibka kadib.
• Dammaanad / Dammaanad
• Waxyaabaha Wax Soo Saarka
• Waxqabadka Badeecada
• Gaarsiinta Degdega ah
• Ansixinta Tayada
• Amarada Yar yar ee la aqbalo